Ike Tụkwasịnụ Protection - China BST (Hongkong) Industrial
Ike Tụkwasịnụ Protection
E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ e ji mara na mmetụta ike-ọkọnọ ọrụ. Otu n'ime ndị a bụ ndị na-arụrụ ọrụ na-echebe ọkọnọ, nke na-depụtara n'okpuru.
Overcurrent : A ọdịda mode mere site mmepụta ibu ugbu a na dị ukwuu karịa kpọmkwem. Ọ a na-ejedebeghị na kacha ugbu a ike nke ike ọkọnọ na-achịkwa esịtidem nchedo sekit na sekit. Ọ nwekwara ike imebi ike ọkọnọ na ụfọdụ. Short sekit n'etiti ike-ọkọnọ mmepụta na ala nwere ike ịmepụta okwukwo n'ime usoro ndị na-bụghị naanị site na kacha ugbu a ike na esịtidem impedance nke ike ọkọnọ. Enweghị ịmachi, a elu ugbu a nwere ike ime ka ekpo oke ọkụ na imebi ike ọkọnọ nakwa dị ka ibu na ya interconnects (biri ebi circuit iba metụtara, Gịnị). Ya mere, ọtụtụ ike onunu kwesịrị nwere ugbu a na ịmachi (overcurrent nchedo) na activates ma ọ bụrụ na mmepụta ugbu a karịa a kpọmkwem kacha.
Overtemperature: A okpomọkụ dị elu karịa na ike ọkọnọ si kpọmkwem uru ga-gbochie ma ọ bụ ọ pụrụ ime ka ike-ọkọnọ ọdịda. Oké ọrụ okpomọkụ nwere ike imebi a ike ọkọnọ na sekit na sekit jikọọ ya. N'ihi ya, ọtụtụ onunu jiri a okpomọkụ ihe mmetụta na metụtara na sekit na sekit iji gbanyụọ na ọkọnọ ma ọ bụrụ na ya na-arụ ọrụ okpomọkụ karịa a kpọmkwem uru. Karịsịa, Semiconductors eji na ọkọnọ na-enweghị ka okpomọkụ karịrị ha kpọmkwem ókè. Ọtụtụ onunu gụnyere overtemperature nchebe na-agbanyụ na ọkọnọ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ karịa kpọmkwem ịgba.
Overvoltage: Nke a ọdịda mode emee ma ọ bụrụ na mmepụta voltaji aga n'elu kpọmkwem DC uru, nke nwere ike wetara oké DC voltaji nke na-emebi ibu na sekit na sekit. A, electronic usoro ibu nwere ike idi elu ka 20% overvoltage enweghị ịba ọ bụla na-adịgide adịgide mmebi. Ọ bụrụ na nke a bụ a echiche, họrọ a ọkọnọ na-ebenata a n'ihe ize ndụ. Ọtụtụ onunu gụnyere overvoltage nchebe na amama ọkọnọ ma ọ bụrụ na mmepụta voltaji karịa a kpọmkwem ego. Ọzọ obibia bụ a crowbar zener diode na-eme zuru ezu ugbu a na overvoltage fọrọ nke mere na ọrụ ọ na ike-ọkọnọ ugbu a na ịmachi na ya shuts ala.
Soft Malite: Inrush ugbu a mmachi pụrụ ịdị mkpa mgbe ike bụ nke mbụ etinyere ma ọ bụ mgbe ọhụrụ mbadamba na-ekpo ọkụ plugged. A, nke a na-enweta site a adụ-mmalite circuit na slows mbụ ịrị elu nke ugbu a na mgbe ahụ na-enye ohere nkịtị ọrụ. Ọ bụrụ na ekpe untreated, na inrush ugbu a nwere ike n'ịwa a elu elu odori ugbu a na metụtara mmepụta voltaji. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe dị mkpa echiche, họrọ a ọkọnọ na nke a mma.
Undervoltage Lockout: Mara dị ka UVLO, ọ na-enyo na ọkọnọ na mgbe ọ esịmde a elu nke ọma ọsọ ọsọ voltaji na-agbanyụ na ọkọnọ ma ọ bụrụ na ndenye voltaji dara n'okpuru a ụfọdụ uru. Nke a na atụmatụ na-eji maka onunu na-arụ ọrụ site na ịba uru ike nakwa dị ka batrị. Mgbe ejikwara si batrị dabeere ike UVLO disables ike ọkọnọ (nakwa dị ka usoro) ọ bụrụ na batrị discharges ukwuu nke na ọ tụlee ọkọnọ si input voltaji oke ala ikike pụrụ ịdabere na ime.
Akpa Ndakọrịta (EMC): Gbasara imewe usoro iwelata akpa nnyonye (EMI). Na mgba ọkụ-mode ike onunu, a DC voltaji na-ghọrọ ka a chopped ma ọ bụ a pulsed waveform. Nke a na-eme ka ike ọkọnọ n'ịwa warara-gbalaga mkpọtụ (EMI) na isi nke ịmafe ugboro na ya metụtara harmonics. Iji nwere mkpọtụ, Nsukka ga ebelata nwetara ma ọ bụ na-eduzi umu anwuru.
Power-ọkọnọ emepụta ebelata EMI radieshon site gbaa ọkọnọ na a metal igbe ma ọ bụ ịgba mkpuchi bụrụ na a dara ihe onwunwe. Manufacturers kwesịkwara ntị ka esịtidem layout nke ọkọnọ na wiring nke na-aga na nke ọkọnọ, nke nwere ike igbanye mkpọtụ.
Ọtụtụ n'ime ndị na-eduzi na nnyonye anya na ike akara bụ n'ihi nke isi ịmafe transistor ma ọ bụ mmepụta rectifiers. Na ike-akpata mgbazi na kwesịrị ekwesị transformer imewe, njikọ nke okpomọkụ sink, na nyo imewe, na ike-ọkọnọ emeputa ike belata ekenịmde nnyonye anya nke mere na ọkọnọ nwere ike isi nweta EMI usoro iwu gị n'ụlọnga nkwado enweghị ịba oké nyo na-eri. Mgbe ịlele ịhụ na ike-ọkọnọ emeputa-emezu ihe ndị a chọrọ iji nke usoro iwu EMI ụkpụrụ.